नेकपा गठनको एक वर्ष वित्दा पनि किन बन्न सकेन पोलिटब्युरो? – Himshikharnews.com
नेकपा गठनको एक वर्ष वित्दा पनि किन बन्न सकेन पोलिटब्युरो?
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०९:३३
नेकपा गठनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पोलिटब्युरो बन्न सकेको छैन । दुई अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरू नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा व्यस्त हुँदा सचिवालय बैठकसमेत स्थगित भयो । पोलिटब्युरो नबन्दा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसमेत अवरुद्ध भएको हो । जनसंगठनहरूको एकीकरण घोषणासँगै ३ जेठमा पोलिटब्युरो टुंग्याउने तयारी थियो । तर, अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’बीच गृहकार्य नपुगेको भनी पोलिटब्युरो घोषणा गरिएन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ।
सचिवालय सदस्यलाई शक्तिशाली विभाग
मन्त्रीहरूलाई पनि विभाग र जिल्लाको नेतृत्व
मन्त्रीहरूलाई पनि केन्द्रीय विभाग, इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको तयारी छ । ‘जिम्मेवारी बाँडफाँटमा हाम्रो पार्टीमा जहाँ सिम, त्यहीँ पानीजस्तै नीति लागू भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘अब पनि दोहोरो जिम्मेवारी नपाइने मापदण्ड लागू हुने सम्भावना न्यून छ ।’
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्द्धन